ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးပြင်သစ် fries, Finger ကိုလျက် Start | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား > ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးပြင်သစ် fries, Finger ကိုလျက် Start
ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးပြင်သစ် fries, Finger ကိုလျက် Start
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24/04/2020)
ဘယ်သူမှတကယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပြင်သစ် fries ၏အစစ်အမှန်ပုံပြင်သိတယ်. သူတို့ပြင်သစ်ကနေလာမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကိုတောင်သေချာမဖွစျနိုငျ, မှာအားလုံး. စောင့်, ဘာ?! Yeap, သင်မှန်ကကြားဖူးတယ် – ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ပြင်သစ်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤအစားအစာအခိုင်အမာပါပြီ, သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသငျသညျစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ပုံပြင်များရှိ.
ဒေသခံဘယ်လ်ဂျီယံပုံပြင်အရ, Meuse ချိုင့်ထဲကနေဆငျးရဲသားရွာသားများသည်မကြာခဏသူတို့ကမြစ်အတွင်းဖမ်းမိသေးငယ်တဲ့ကြော်စားငါးကိုစားကြ၏. ဆောင်းတွင်းကာလအတွင်း, မြစ် ကျော်အေးခဲမယ်လို့, ချမှတ်ခြင်း ငါးဖမ်း မဖြစ်နိုင်သော. သို့ဖြစ်., ရွာသားတွေရှာတွေ့ခဲ့ရသည် အစားအစာကတခြားသတင်းရင်းမြစ်. အာလူးအကောင်းတစ်ဖြေရှင်းချက်နဲ့တူသလိုပဲ. ဒါကြောင့်သူတို့ကငါးကိုပြုတူညီသောလမ်းသွေးတွေစီးထွက်လာကြောင့်ကြော်စတင်. ဒါကပထမဦးဆုံးပြင်သစ် fries ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြပုံကိုဖွင့်. အကြှနျုပျတို့သညျယခုဂုဏ်နကိုမေးနေတာဘာလဲဆိုတာသိ. ဤဇတ်လမ်းမှန်ခဲ့လျှင်, အဘယ်ကြောင့်သူတို့ထို့နောက်ပြင်သစ်ဟုခေါ်ကြသည်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမေရိကန်စစ်သား. ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ပထမကမ္ဘာစစ်သုံးစွဲသူသည်ဤနက်ရှိုင်းသော-ကြော်အာလူးကိုမြည်းစမ်းခြင်းနှင့်ပုံကသူတို့ကိုခစျြတဲ့. ဘယ်လ်ဂျီယံပြင်သစ်ပြောသောဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ကိုပြင်သစ် fries ကိုခေါ်. ဘယ်လိုစိတ်ကူးယဉ်, မှန်သော?
တစ်ဦးမှဒီဇာတ်လမ်းကိုပြောပြပါ ပြင်သစ်တွင်ဒေသခံ, သူတို့ဒါကြောင့်ခက်ခဲသငျသညျမသက်မသာခံစားမိပါလိမ့်မယ်သင်ကပြုံးရယ်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့ဟာဖြစ်ကောင်းပင်အရူးသင်တို့ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်. "ဒီတောက်ပပြင်သစ်စားဖိုမှူးပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပြင်သစ် fries တီထွင်, ဇာတ်လမ်း၏အဆုံး. သူတို့ဟာပြင်သစ်များမှာ, ရီစရာဖြစ်ပါဘူး, အစဉ်အမြဲသူတို့သည်နောက်တဖန်ဘယ်လ်ဂျီယံဖြစ်ကြသည်ဟုမဆိုပါဘူး! အစဉ်!"ဒါကလို, တော်တော်များများ, စကားဝိုင်းမှာဖြစ်.
တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း, ကျနော်တို့လုံးဝ-သညျကောငျးကငျ-မျိုးစုံမြည်းစမ်း-ရေစာနက်ရှိုင်း-မိတျဆှေ-လုံးဝ-ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့-ပေမယ်-ဒီ LOVE, ကျနော်တို့ပြင်သစ်နိုင်ငံပြင်သစ် fries အစာစားခြင်းသို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်နေလျှင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ. ယနေ့တွင်, သူတို့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးဘေးထွက်ဟင်းလျာများ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏. ထိုသူတို့သည်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသော dips နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်, ဒါပေမယ့်လူတွေကများသောအားဖြင့် ketchup ကိုရှေးခယျြ, Mayonnaise, နှင့်ရှာလကာရည်. သငျသညျပြင်သစ်သူတို့ကိုခေါ်လျှင်ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူး, ကိုယ့်ချစ်ပ်များ၏ဘယ်လ်ဂျီယံ, သငျသညျပြင်သစ်၌သူတို့မြည်းစမ်းသင့်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးပါစေ
Rimmer & ချိုသော, လိုင်ယွန်: Mouthwatering မွေ့လျော်
သင်တစ်ဦးအစားကောင်းကြိုက်သူများ Are? ကောင်းသော! သငျသညျဤအရပျကိုခစျြပါလိမ့်မယ်! Rimmer & Zoet Vieux လိုင်ယွန်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာသေးငယ်တဲ့ကြော်ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်, မှတစ်ခုဖြစ်သော အကျော်ကြားဆုံး လိုင်ယွန်အတွက်လမ်းများ. သင်ဒီမှာတစ်ကန်တော့ချွန်ထဲမှာ fries ရနိုင်. သင်လည်းငံပြာရည်ရလိမ့်မယ်, မဖြောင့်တဲ့ကန်တော့ချွန်ထဲမှာ, အစားသေးငယ်တဲ့ပလပ်စတစ်ပန်းကန်ထဲမှာ. ဤအ fries ဒါအရသာသောအရာသူတို့ထူခြင်းနှင့်ကို double-ကြော်ဖြစ်ပါတယ်. Sooo crispy! သငျသညျအစဉျအမွဲမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူဤအရပ်ဌာနအားဖြင့်ရပ်တန့်ပါလျှင်, တစ်ဦးတည်းသာကန်တော့ချွန်နှင့်ရှယ်ယာကိုဝယ်ခြင်းငှါ, မိုက်သောမဖြစ်ပါဘူး. ယခုအချိန်တွင်သင်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤအာလူးအရသာ, သငျသညျသူတို့အပေါ်မှာတိုက်ပွဲကိုစတင်ရန်လိမ့်မယ်! Erm ... ကျွန်တော်တို့ဟာရှိကိုသိ.
ဂျော့ခ်ျ V ကိုကဖေး, ပဲရစ်: ညျ့အဝမှပဲရစ်တွေ့ကြုံခံစား
သငျသညျ Champs Elysees ဖို့ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျကမင့်နဲ့တူ ပဲရစ်. အထူးသဖြင့်လျှင် သငျသညျဥရောပမှတစ်ဆင့်ခရီးသွားလေ့ကျင့် (သို့သော်အခြားခေါင်းစဉ်င်). ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ဂျော့ခ်ျ V ကိုကဖေးဟာ ambiance နှင့်ပြင်သစ်အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြင်သစ် fries ခံစားရန်ပြီးပြည့်စုံသောအရပ်ဖြစ်ပါသည်. ယင်း၏တည်နေရာပေးထား, သင်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းမှာအံ့အားသင့်မဖြစ်သင့်. သင်တို့မူကား, Parisian လေထုထဲတွင်စိမ်တဲ့အခါမှာ, သင်ကတိုင်းတစ်ပြားရကျိုးနပ်မယ့်သိမြင်ပါလိမ့်မယ်. သင်ကလူကိုကြည့်နေစဉ်အနားယူအနားမှာရှောက်သွား, နှင့်စားပွဲထိုးန်းကျင် running. အဆိုပါစားသောက်ဆိုင်ပုံမှန်ပြင်သစ်အစားအစာကမ်းလှမ်း, နှင့် yummy fries နီးပါးအရာအားလုံးကိုအတူပါလာ.
နယူးတံတား, La Frite ပြင်သစ်, ပဲရစ်: ပြင်သစ်တွင်ပြင်သစ် fries မှတစ်ဦးကပြင်းထန်ချဉ်းကပ်
ပြင်သစ်တွင်ပြင်သစ် fries ယုံကြည်သူတွေကိုရုံဘက်ပန်းကန်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင့်လျော်သောမုန့်ညက်ဤအရပ်မှထွက်စစ်ဆေးရမည်. ထိုအပိုတငျး-Neuf, La Frite Françaiseမှာ fries အရသာသူမည်သူမဆိုသဘောတူရန်အမြန်ဖွစျလိမျ့မညျ. ချစ်စရာအဖြူအဝါရောင်-and ကတ်ထူပြားဟင်းလျာများအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်, ပြင်သစ် fries ဒီမှာအဓိကသင်တန်းများမှာ. သင်ပင်သေးငယ်တဲ့သစ်သားအမဲချိတ်ရ. အများကြီးကွဲပြားခြားနားသော dips အကြားကိုရွေးချယ်ပါ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွံဉာဏျအိမ်တော်သို့ကျဆင်းလာဖြစ်ပါသည်, သည် "မှင်သို့ကျဆင်းလာ။ " သင်လျှင် fries ပင်ပိုကောင်းမြည်းစမ်း ရောနှောဖို့ Parisian ဝက်ပေါင်ခြောက်ကိုထည့်သွင်း.
က de Clercq, ပဲရစ်: Belgian Version of Fries
သငျသညျသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောသည်ကိုသိ: "သင်ဘယ်မှာစားရန်မသိလျှင်, လူများ၏အပြည့်အဝသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားပါ။ "အဲဒီစည်းမျဉ်းပြီးနောက်, ကျနော်တို့ De Clercq တက်အဆုံးသတ်, ဘယ်လဂျီယံ fries ရောင်းဖို့မလုပ်ပဲတစ်ဆိုင်မှာ. အဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံဗားရှင်းချောကျိကျိဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ပြင်ပအပေါ် crunchy, နှင့်အတွင်းပိုင်းအပေါ်ပျော့, ငါတို့ရှိသမျှသည်၌ရှိကြ၏. သင်တို့သည်ဤ mouthwatering အာလူးတုတ်မှတပါးအခြားအရာတစ်ခုခုလိုပါက, ကျနော်တို့ဘာဂါအကြံပြု, သူတို့သည်လည်းစူပါအရသာကြောင့်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သင်ရုံ fries ၏ပုံချင်တယ်ဆိုရင်, လေးလူတို့အဘို့လောက်ပေ၏တဲ့ကုမ္ပဏီကြီး pack ကိုအမိန့်.
le Relay de l'Entrecote, ပဲရစ်: ပြင်သစ်အတွေ့အကြုံခုနှစ်တွင်တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့ပြင်သစ် fries
ကျနော်တို့ပြီးသားပြင်သစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတုံးနှင့်အတူ fries စားရန်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖူး? အဘယ်သူမျှမ? ကောင်းစွာ, အဲဒီမှာ you go. သူတို့ကလုပျ. ဒါဟာသူတို့ရဲ့အရာပါပဲ. သငျသညျအမိန့်သာအဓိကဟင်းရဲ့ Le Relay de l'Entrecote အတွက်. အလေးအနက်ထား, ဤအရပျမှာအဘယ်သူမျှမကအခြားအဓိကသင်တန်းရဲ့. သငျသညျထိုင်ယခုအချိန်တွင်, အဆိုပါစားပွဲထိုးသင်သည်သင်၏ကင်ချက်ပြုတ်ခံရဖို့ကြိုက်တယ်သင်မည်သို့တောင်း: ရှားပါးသော, အလတ်စားသို့မဟုတ်ကောင်းစွာပြီးပြီ. အဘယ်အရာကိုဒီကင်စေသည် ထူးခြားတဲ့အဘယ်သူ၏စာရွက်ထက်ပိုမိုများအတွက်လျှို့ဝှက်ထားခဲ့ပြီးထိုငံပြာရည်ဖြစ်ပါသည် 50 နှစ်ပေါင်း. အဘယ်မြေတပြင်လုံးသည်ဘောဇဉ်လုံးဝတွန်းလှန်စေသည်ပြင်သစ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောရွှေပြင်သစ် fries များမှာ.
Chez Boris, ပဲရစ်: ပြီးပြည့်စုံသောအစားအသောက် Make အဘယ်သူသည်လယ်သမားများ
ပြင်သစ်တွင်အသားကင်နှင့်ပြင်သစ် fries စားရန်ပြီးပြည့်စုံသောအရပ်ရှာဖွေနေ? နောက်တဖန်မပြောပါ. ကျနော်တို့ကဒီစားသောက်ဆိုင်ကိုတွေ့. အမဲသားကို၏အရည်အသွေးသည်အခြားအဆင့်တွင်ဖြစ်ပါသည်. ပြင်သစ် fries လက်အမဲသားအဆီထဲမှာဖြတ်ကြော်နေကြသည်, အရာကအသံထက်အများကြီး tastier ဖြစ်ပါသည်. စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များလယ်သမားများမှာ, ဒါကြောင့်သူတို့ကသငျသညျအစာစားနေတဲ့အဘယ်အရာကိုကောင်းစွာသိကြ. သူတို့တစ်တွေနည်းနည်းကြောင့်တစ်ခုတည်းသောတိုင်ကြားချက်စျေးနှုန်းပါလိမ့်မယ် ... မြင့်မားတဲ့. သင်တို့မူကား Chez Boris အတွက်အစားအစာကိုမြည်းစမ်းတစ်ချိန်က, သငျသညျတစ်ဦးတည်းသာအရာပြောနိုင်: "ငါ့ပိုက်ဆံယူပါ, ဒီမှာ - အချို့ထက်ပိုယူ!"
သဲလွန်စ: သင်တစ်ဦးစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် ပဲရစ်မီးရထားမှလန်ဒန် ယခုသင်တို့ရှိရာသို့အလျင်အမြန်စဉ်းစားခြင်းထက် Chez Boris အတွက်ဖြစ်!
ပြင်သစ် fries ကမ္ဘာပေါ်မှာနေရာတိုင်းဟာအားရစရာဖြစ်လာကြပါပြီ. လူတိုင်းကသူတို့ကိုရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အကြိုက်ဆုံးအစားအစာသူတို့နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေသည်. နေဆဲ, ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကတီထွင်ခဲ့သည်ရှိရာသူတို့ကိုအစာစားရန်သင့်အားအကြံပေး. ငါတို့သည်လည်းမိမိတို့၏နေအိမ်တိုင်းပြည်ပြင်သစ်ကြောင်းယုံကြည်, မဟုတ်ဘယ်လ်ဂျီယံ. နှင့်, သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းအဖြစ်, ပြင်သစ်၌ကြီးသောပြင်သစ် fries နီးပါးတိုင်းပြင်သစ်ထောင့်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်. သင်တစ်ဦးဘက်ပန်းကန်ကဲ့သို့သူတို့ကိုစားနိုင်, ဒါမှမဟုတ်အဓိကသင်တန်းအဖြစ်. ဒါကြောင့်, ကြာကြာတစ်စက္ကန့်စောင့်ဆိုင်းကြဘူး!
မှာကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု Save-A-ရထား ပြင်သစ်မှသင့်ရဲ့လက်မှတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ, နှင့်ပြင်သစ်မွေ့လျော်အတွက်ပြင်သစ် fries အဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွငျဆငျ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-french-fries-france%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / es သို့မဟုတ် / TR နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ja ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#frenchfries #fries အစာ အစားကောင်းကြိုက်သူများ travelfrance
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား